Ny hevitry ny karatra Tarot telo amin'ny sabatra | Famakiana Tarot - Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Ny hevitry ny karatra Tarot telo amin'ny sabatra
Ny telon'ny sabatra telo amin'ny Tarot
Ny telo amin'ny sabatra mahitsy
Nivadika ireo sabatra telo
Symbolisman'ny numerology an'ireo sabatra telo
Ny tandindona ao amin'ny karatra tarot The Three of Swords, mampiseho fo voatsatokaky sabatra telo ary mihantona eny amin'ny lanitra misamboaravoara, dia sarotra kokoa noho ny fijery azy.
Rehefa miseho amin'ny famakiana ny karatra Three of Swords dia mangataka anao izy handavaka lalindalina kokoa - angamba any amin'ny faran'ny fanahinao.
Huh? Inona no dikan'izany?
Ny tarot ny Three of Swords dia mampianatra fa ny fanekena ny fanaintainanao dia ampahany lehibe amin'ny fizotranao. Raha tsy mahatsapa fanaintainana ianao dia tsy ho fantatrao fa marary ianao.
Tsia, ny fanaintainana dia tsy 'manadio ny fanahy.' Tsy mahatonga anao ho hendry na ho mendri-kaja izany fa famantarana fa 'zavatra' dia tena tsy mety satria ny fizokiantsika dia ny hiaina ao anatin'ny tontolo feno fifaliana.
Matetika isika dia tsy miraharaha ireo olana ary manao izany dia tsy hampandeha ireo olana. Vao mainka miharatsy ny toe-javatra.
Amin'ny alàlan'ny fiatrehana ny tahotra (ny fototry ny tsy fitoviana rehetra) dia afaka mandeha amin'ny lalan'ny fanasitranana isika.
Ny Telo amin'ny sabatra ' Ny lohateny Kabbalistic dia Tompon'ny alahelo . Amin'ny ankabeazan'ny famakiana tarot, ny karatra Three of Swords dia ny alahelo iainan'ny olombelona amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ity tranga ity dia manondro an'io ranomaso 'mitomany toy ny zaza' io izay mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa rehefa avy eo.
Nanafika i Saturnus Libra toy ny omby any amin'ny magazay any Shina, ary mandeha izany fandanjalanjana malefaka izany ezahinao hazonina ao Sabatra roa !
Fa raha mahitsy fo amin'ny tenanao ianao dia tsy natao haharitra.
inona no dikan'ny loko mainty amin'ny lafiny ara-panahy
Misy lining volafotsy eto. Mariho, manondro ireo sabatra telo ireo. Midika izany fa miala sasatra izy ireo.
Eny, vita ny simba. Fa tsy misy intsony ny ho avy.
Masina ireo ranomaso ireo. Ranomaso manasitrana izy ireo.
Na dia ny tarot The Three of Swords aza dia iray amin'ireo karatra sarotra indrindra amin'ny tokotanin-tsambo, jereo akaiky ireo sabatra . Mitovy amin'ny lakroa ireo. Amin'ity, ny karatra tarot ny Three of Swords dia afaka manome sosokevitra fa ireo izay 'mitondra ny hazofijaliany' amin-kerim-po, ho tonga mifoha ara-panahy bebe kokoa - toa an'i Kristy '.
Rehefa tonga saina bebe kokoa isika, ny tenintsika, ny fihetsika ataontsika ary ny fihetsika ataontsika dia misy akony tsara kokoa amin'ity tontolo ity.
Ny hevitry ny karatra Tarot telo dia mahitsy
Na eo aza ny sary tsy milamina ao amin'ny karatra Three of Swords, tsy misy loza atsy ho atsy. Na izany aza, dia manondro firoboroboan'ny fihetseham-po lehibe izy io. Azo inoana fa mikoriana ny ranomaso.
Fantatrao anefa fa efa ela ity antsoantso ity. Ny zavatra hafahafa dia ny lava sy lava mitomany ianao no mahatsapa ho tsara kokoa.
Ny psikology dia miantso an'io traikefa io ho catharsis: famoahana mahery vaika sy ara-pientanam-po.
Amin'ny kolontsaina maro, ny fitomaniana dia ampahany amin'ny fifohazana ara-panahy. Ny vatanao no mampatsiahy anao fa mbola velona ianao.
Raha ny marina dia ny zavatra voalohany ataonao tsara aorian'ny fakana rivotra voalohany eto amin'ity izao tontolo izao ity.
Tampoka teo dia tsy ao anaty fampiononana sy fiarovana ny kibo intsony ianao. Fihetseham-po vaovao iray tapitrisa tapitrisa manery anao hanombatombana ny zava-drehetra fantatrao sy tsapanao hatrizay.
Amin'io lafiny io, ny Three of Swords dia karatra fanombohana ihany koa.
Raha ampiharina amin'ny fiainana andavan'andro, ny karatra tarot Three of Swords dia milaza aminao fa ny fihetsem-ponao izao dia tsy maintsy miatrika zava-misy mangatsiaka sy mafy ary mitombina.
Ohatra, mety ho hitanao fa misy tolo-kevitra narotsakao notsongaina miaraka amina fanontaniana miavaka - ara-bakiteny!
Raha nahavita ny enti-modinao ianao dia azonao antoka fa hitondra an'ity tafio-drivotra ity ianao.
Na inona na inona vokany, ny Three of Swords dia hampianatra anao ny fifehezana takiana mba hanoherana ny fanamby manaraka. Mihodina miaraka amin'ireo totohondry. Ianaro izay azonao atao. Fa na inona na inona, aza avela ho ringan'ny zava-mitranga ianao izao.
Mahery lavitra noho ny nieritreretanao azy ianao!
leo vehivavy sy pisces lehilahy mametaveta
Ny Three of Swords dia nanipika ihany koa fa tapitra ny ampahany ratsy indrindra amin'ny krizy. Manondro ambany ireo sabatra. Milamina izy ireo, ary tsy hitsangana intsony.
Eny, mandratra ianao izao. Fa ny zava-dehibe dia velona ianao.
Raha ny momba ny làlana ara-panahinao dia ao anatin'ny karatra tarotan'ny Three of Swords izay atrehanao mifanohitra amin'izay: Ahoana no ahafahan'ny Andriamanitra tsara mamela ny zava-dratsy hitranga eto amin'ity tontolo ity? Ny valinteninao amin'ity fanontaniana ity dia hamaritra ny fomba hisehoan'ny fivoaranao ara-panahy sisa.
Ny telo amin'ireo sabatra dia miverina amin'ny dikan'ny karatra Tarot
Rehefa avadika, ny tarika Three of Swords dia nanondro fa tsy maharaka tsara ny famoizam-po na fihemorana manokana ianao.
Angamba ianao efa nanosika ny fanaintainanao hatry ny ela. Etsy ankilany, ity karatra ity dia manondro ihany koa fa ny fihetsika ataonao dia matetika loatra rehefa mihoampampana ny fihetsem-po.
Samy fomba tsy mahasalama amin'ny fitantanana ny ankohonanao mampihetsi-po ireo.
Raha manosika hatrany ny ratrao ianao dia tsy hiala izy ireo. Hihombo sy hitombo izy ireo raha tsy manao na inona na inona momba azy ireo ianao. Amin'ny farany, afaka mihinana anao izy ireo.
Ahoana ny fomba itondranao ny fihetseham-po mafy - ny fahatsapana tsara na ny fihetseham-po ratsy? Ny karatra Three of Swords miverimberina dia manome soso-kevitra fa mora tezitra ny mandanjalanja ara-pientanam-po anao.
Vaovao tsara dia mety hanome anao fahatsapana diso tafahoatra. Ohatra, raha vao nahaloa ny trosan'ny carte de crédit anao ianao dia mety manapa-kevitra ny handany vola amin'ny fandaniam-bola mihoa-pampana, hampitombo ny karanao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
fampifanarahan-dehilahy sy vehivavy vehivavy libra
Ny vaovao ratsy dia mety handefa anao hanidina anaty hatezerana jamba, ary mampidi-doza izany ho an'ireo manodidina anao - sy ny tenanao. Mila mitandrina manokana ianao rehefa mifanatrika amin'ireo nanisy ratsy anao. Ny fahamarinana sy ny valifaty dia tsy mitovy.
Matetika ny fahamarinana dia mitaky ny hanaovanao marimaritra iraisana, fa io kosa dia manadio ny lalan'ny fanidiana. Ny valifaty dia mamaly fotsiny ny ratsy iray amin'ny ratsy lehibe kokoa.
Ary aiza no hametrahana anao ho karmika?
Taratasy Metaphysical The Three of Swords Tarot:
Famantarana Zodiac : Libra
The Three of Swords Card & Tarot Numerology
Kabbalistically, misy telo mifandraika amin'i Jupiter, izay mampatsiahy anao ny tanjonao ambonimbony kokoa.
Amin'ny nentim-paharazana Isa, 3 mifanitsy amin'i Saturnus izay manimba tokoa ny fitaomany. Na izany aza, Saturn dia fantatra amin'ny anarana hoe 'Great Initiator.' Raha atambatra, ireo angovo ireo dia manolo-kevitra fa mety misy fomba iray amin'io hadalana io.
zavatra mifandray amin'ny volana Mey
fampifangaroana ny vehivavy libra sy ny vehivavy scorpio
inona no ao amin'ny retrograde izao
firy ny planeta misy ary iza ny anarany